मासु का पत्ता एक उत्कृष्ट नाजुक स्वाद द्वारा विशिष्ट छ। व्हाइड इन्डेन्ट व्हाइटको आधारमा तयारी गर्नुहोस्, त्यसैले यो केहि हावा र वजनहीन जस्तो देखिन्छ। आजको प्रकाशनमा यस परिष्कृत मिठाईको लागि धेरै रोचक व्यञ्जनहरू पेश गरिनेछ।
Mascarpone सँग विकल्प
यो व्यञ्जन अनुसार पकाइएको डिश, यसको असाधारण आरामको लागि उल्लेखनीय छ। यो पनि उनीहरूको व्यक्तिलाई हेर्ने द्वारा खाएको हुन सक्छ। प्रक्रिया आफैलाई धेरै समय लाग्दैन, तर कुकुरलाई निश्चित कुञ्जीहरू चाहिन्छ। तपाईंले उत्पादनहरूसँग काम सुरु गर्नु अघि, तपाईंको भान्सालाई तपाइँसँग आवश्यक सबै कुराहरू निश्चित गर्नुहोस्। एकमल मेरेंग रोल तयार गर्न, तपाईंलाई चाहिन्छ:
एक सय अजीब ग्राम।
चार अन्डा सेतो।
एक सय पचास ग्राम मस्कार्पोन।
तीन चम्मच पाउडर पाउनु।
35% क्रीम को एक सौ मिलवाला।
कडा चकलेटको आधा टाइल।
डिब्बाबंद खूबानी या आडू को नौवें ग्राम।
एक व्यापारी रोल तैयार गर्न को लागी यो आलेखमा यस लेखमा विचार गरिन्छ, थप सुगन्धित भयो, तपाईं माथि सूचीमा वेनिला शर्कराको प्याकेट समावेश गर्न सक्नुहुनेछ।
पहिले तपाईंलाई meringue गर्न आवश्यक छ। यसका लागि, व्हिस्सेर्स मिक्सरसँग पिटेको हुन्छ, बिस्तारै ती शिर र वाइनिनलाई थप्दै। परिणामकारी मोटाई, घने मास एक पाक पाना मा रेखांकन संग रेखांकित मा neatly बाहिर राखिन्छ ताकि यो सतह मा समान रूप मा वितरित र ओवन को पठायो। एक घण्टाको एक चौथाईको लागि एक सय र उचाई डिग्रीमा झिकेर। समाप्त गरिएको केक ओवनबाट हटाइएको छ, नक्कली पानामा राखिएको छ, तुरुन्तै बन्द भयो र त्यसलाई कागजबाट हटाइयो।
Merenga ठुलो हुँदा, तपाईं क्रीम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको तयारीको लागि, ठुलो क्रीम लिनुहोस् र मिक्सरसँग बिस्कनुहोस्, मध्यम गतिमा सञ्चालन गर्नुहोस्। यस प्रक्रियामा, परिणामतः ठूलो मात्रामा पाउडरको पखेटा पाउडर पाउडर गरिन्छ। त्यस पछि, व्हीप्ड क्रीम mascarpone संग संयुक्त र धीरज सम्म मिश्रित संयुक्त।
ठुलो मेरेंगोवी केक तयार रेड क्रीम संग चिकन, समान रूप मा यो सम्पूर्ण सतह मा वितरित। माथि देखि कटाई डिब्बाबंद डिब्बा फल, पहिले कागज पेडहरु संग सूखे, र रोल मा गुना। नतीजा उत्पादन धीरे व्यंजनमा सारिएको छ किनकि सीम तल छ। Mascarpone संग समाप्त meringue रोल पिघल चकलेट संग डाला छ र तालिका मा सेवा।
पिस्ताको साथ संस्करण
यो रोल धेरै हल्का र हावामा छ। स्वादिष्ट व्यवहारको आठ सर्भर तयार गर्न तपाईंलाई उत्पादनको एकदम सरल सेट आवश्यक पर्दछ। अनि धेरै आवश्यक अवयवहरू प्रायः लगभग हरेक भान्सामा छन्। अप्रिय आश्चर्य देखि बचने को लागि, आफ्नो प्यान्ट्री को सामाग्री को अगाडी जांच को कोशिश करो। यो हुनुपर्छ:
खुबै पिस्ताको फोहर।
सिरका दुई चम्मचहरू।
स्टार्च र वेनिला निकाटको चम्मचमा।
दुई पकाएको आम।
बक्सको एक सय पचास ग्राम।
दुई सौ मिलवाला खट्टा क्रीम।
तपाईं केवल एक स्वादिष्ट, तर पनि सुन्दर मेरुङ रोल बनाउनको लागि, तपाईंले माथिको सूचीमा साना परिवर्तनहरू गर्न आवश्यक छ। यो सजावटको लागि सानो मात्रामा पाउडर गरिएको श्वेत र पिस्ताको पूरक गर्न वांछनीय छ।
पहिले तपाईंलाई प्रोटीन संग गर्न आवश्यक छ। तिनीहरू सफा गहिरो कटोरामा खान्छन् र एक मिक्सरसँग बिस्तारै सम्मरहेका हुन्छन्, स्थिर ज्वार प्राप्त हुन्छ। त्यस पछि, नतीजा जनसङ्ख्या शर्कु र सिरका संग पहिले, स्टार्च संग संयुक्त। सबै घने चमकदार मिश्रण सम्म हराउन जारी छ।
प्रोटीन जन मा, कटा पिस्ता थप गर्नुहोस् र राम्रो मिश्रण गर्नुहोस्। परिणाम आटा वितरित संग लिखित रूप को तल मा समान रूप देखि वितरित गरिन्छ र ओवन को लागि पठाएको छ। आधा घन्टाको लागि एक सय र साढे डिग्रीमा मिक्स गर्नुहोस्। समाप्त गरिएको केक पेपरमा राखिएको छ र माथि फर्काइएको छ। यस पछि, ध्यान को पाना हटाउनुहोस्, जुन फारमको तल रेखामा राखियो र फ्रिजमा राखिएको थियो।
एक कटोरा मा भरने को तैयार गर्न को लागी मां को टुकडे को जोड, एक चम्मच चम्मच चीनी, खट्टा को क्रीम र वेनिला निकाल्नुहोस। सबै मिश्रण राम्रो तरिकाले। प्राप्त समूहले ठुलो केक सजिलै पार्छ र यसलाई टुक्रा बनाउँछ। पिस्चको साथ तयार मेरेंगोभी रोल पाउडर भएको शिरको साथ छिटो र पागल संग सजाएको छ।
तपाईंको परिवारको लागि यो अद्भुत मिठाईको स्वादको कदर गर्नको लागी, तपाईंलाई अग्रिम भण्डारमा जानु आवश्यक छ र सबै आवश्यक अवयवहरुमा भण्डारण गर्न आवश्यक छ। यस अवस्थामा, तपाइँसँग तपाइँको औंलाहरू हुनुपर्दछ:
भ्यालीको एक थलो।
35% क्रीम को एक सय पचास मिलिमिटर।
अण्डा को सफेद एक साफ कंटेनर मा डाल दिए र हराएको छ जब नरम चोटियों देखि प्रकट हुन्छ। त्यस पछि, तिनीहरूले बिस्तारै शिकारी र वेनिलिनलाई पनीरहेका छन्, मिक्सरको रुपमा काम नगरेको छ। प्रोटीन घने फोम मा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि, तिनीहरू ब्रेकिंग संग लामबद्ध एक पाक चादर माथि वितरण गरिन्छ र ओवनमा पठाइन्छ। हल्का सुनहरा रंगको उपस्थिति सम्म एक सय र उचाइ डिग्रीमा मिरक गर्नुहोस्। समाप्त केक एक सफा पाना र उल्टोसँग राखिएको छ। यस पछि, प्रयोग गरिएको प्रर्तिक्षा यसलाई हटाइयो र छोटो छोडिन्छ।
क्रीम एक सफा कटोरा मा डाल दिए र हरायो, धीरे - धीरे पाउडर चीनी। परिणामकारी जनमा Maskarpone थपियो। तयार बनाइयो भरिएको कूलको केकसँग ग्रीड हुन्छ। माथि रास्पबेरी र तह फैलियो। मिठाईमा डिशर्ट पकवानमा राखिएको छ। रास्पबेरी संग परिणामस्वरूप मेरेंग रोल चीनी मा पाउडर संग सजाया गएको छ र फ्रिज मा राखयो।
बेरी र पिस्तासँग भिन्नता
अचम्मको स्वादको साथ यो असामान्य मिठाई तयार गर्न, उत्पादनको मानक सेट आवश्यक पर्नेछ। तपाईलाई यो प्राप्त गर्नका लागि, तपाईंलाई आफ्नो भान्साको खोजी गर्न आवश्यक छ:
2 सय ग्राम मस्कार्पोन, शर्करा, पिस्ता र रास्पबेरी।
क्रीमको दुई सय पचास मिलीलीटर।
दुई ग्राम नमक।
थप स्वादपूर्ण मेरुङ रोल प्राप्त गर्न, एक थलो वाइनिन बनाउन वांछनीय छ।
अण्डा कालीहरू घना, फर्म फोममा पिटेका छन्, बिस्तारै तिनीहरूलाई नमक र चिनो लगाएर। कुचल पिस्तौलाहरू परिणामस्वरूप जनसङ्ख्या जोड्नुहोस् र राम्रोसँग मिश्रण गर्नुहोस्। तयार खाएको एक पकाउने ट्रेमा मोटो पराल फैलिएको छ, जसको तल त्रांश संग लामबद्ध हुन्छ र ओवनमा पठाइएको छ। एक घण्टाको एक चौथाईको लागि एक सय र सत्तर डिग्रीमा मिक्स गर्नुहोस्।
एक अलग कंटेनर मा, 35% क्रीम whisk र mascarpone संग गठबंधन। परिणामकारी क्रीम कूलको केकसँग चिकिएको छ, माथिको बिरुवा तयार गरिन्छ र सावधानीपूर्वक जोडिएको छ। माईजर, रस्साबेरी र रस्पबेरीको साथमा मेरेंगोभी रोलिएको छ, चिनी पाउडर संग छिटो छ र कटा पागलले सजाय गरिन्छ।
घरमा आइसक्रीम कसरी बनाउने: सुझावहरू र चालहरू
कसरी फ्राइङ प्यान चिकनको खुट्टामा सही तान्नुहोस्?
Dendrites - यो के हो? संरचना र कार्य dendridov
Forensics - अदालती विज्ञान छ ...
पौडीबाज मार्क Spitz: जीवनी, खेल उपलब्धिहरू, विश्व रेकर्ड
फेशन र शैली: कसरी रूमाल बाँध गर्न
स्मारक Rog Krivoy Rog। शहर को सबै भन्दा प्रसिद्ध स्मारक
"Mexicor" चिकित्सा। प्रयोगको लागि निर्देशन